Saameyntu waxay ku saabsan tahay Is-beddelka, Ma Gaarayo | Martech Zone
Saameyntu waxay ku saabsan tahay Is-beddelasho, Ma Gaarayno
Mar labaad ayey dhacday. Waxaan ku sugnaa munaasabad uu ka hadlayey qof aad u awood badan oo aqoon fiican u leh horumarinta dhacdooyinka isboorti ee caalamiga ah. Wuxuu kahadlayay caqabada warshada haysata soo jiidashada cusub taageerayaasha warshadaha tartanka gaar ah. Kadibna wuxuu yiri erayga… saamaynta.
Saameyn - awood u leh inuu saameyn ku yeesho dabeecada, horumarka, ama dhaqanka qof ama wax, ama saameynta lafteeda.
Kooxdiisu waxay sahminaysay adeegsiga algorithms dhalinta si loo garto dadka wax galaya. Waxay ka codsan lahaayeen caawimaadda saameyntan si ay isugu dayaan inay u soo jiitaan dhagaystayaasha cusub iyo tirada dadka munaasabadda. Kani waa nooca hadalka igu kiciya lowska. In dadka ku jira warshadaha suuqgeynta ay wali rumeysan yihiin in khiyaamada ay tahay oo kaliya in la bixiyo dadka waaweyn qaarkood oo leh meel ballaaran si kor loogu qaado wax soo saarkooda ama adeegyadooda ay ii wadaan nuts. Saamaynta waxay ku saabsan tahay awoodda saameyn ku yeelato, ma ahan oo keliya in la gaaro.
Midkoodna waxa loogu yeero saamayn ku yeelashada algorithms halkaas waxaa laga bixiyaa qiyaas sax ah oo ku saabsan awoodda qofku u leeyahay inuu saameyn ku yeesho go'aanka wax iibsiga. Dhammaantood waxay ku saleysan yihiin tirada taageerayaasha, kuwa raacsan iyo awoodda ay toos ugu gaari karaan dadka waawayn ama loo maro retweets iyo saamiyada. Gaar, gaadho, gaadho.
Tani had iyo jeer waa arrinta ku saabsan xeeladaha suuq-geynta dhaqanka. Waxay leeyihiin gaari ballaaran, sidaa darteed dabcan xoogaa saameyn ah ayaa la cabbiri karaa. Laakiin waligood kuma guuleysan doonaan helitaanka runta saamaynta runtii way u baahan yihiin. Waxaan arkaa badeecooyin iyo adeegyo la riixay markasta oo la yiraahdo saameynta warshadeena… iyo marar badan oo aan macluumaadkaas la wadaago shabakadeyda. Laakiin marar dhif ah ayaan dhab ahaantii iibsadaa iyada oo ku saleysan qof leh saameyn sarreeya.
Waa wax laga xumaado sababta oo ah warshadaha hogaamiyahani waxay durba leeyihiin saameyn ka badan intii ay waligood u baahnaayeen - way leeyihiin malaayiin taageerayaal ah caalami ahaan u duulaya oo la kulmaya dhacdadooda. Dadkani waxay qarash gareeyaan oo ay joogaan dhowr maalmood, iyagoo ku raaxeysanaya muusig, cunno, dhacdooyinka kahor iyo tartanka kadib ee ku hareeraysan tartanka ugu caansan adduunka.
Si aan u cadeeyo - Kama soo horjeedo adeegsiga waxa loogu yeero saameynta. Laakiin u isticmaal qiimaha ay dhab ahaan keenaan… u isticmaal qaado fariinta, maahan abuuro. Haddii aad rabto inaad run ahaantii saameyn ku yeelato dadka, waxaad u baahan tahay wadaag sheekooyin in dadku si qiiro leh ugu lug yeelan karaan si loo wado go'aanka wax iibsiga. I tusi sheeko ku saabsan qof da'dayda ah, dakhligayga, iyo danahayga oo leh waayo-aragnimo aan caadi ahayn dhacdadaada.
Iyada oo leh malaayiin taageerayaal ah, waxaa jira malaayiin sheekooyin soo jiidasho leh oo ku saabsan dadyowga iyo xiisaha kasta. Iyagu si fudud ugama aysan dhicin iyaga! Awood u yeelo awooda dhagaystayaashaada inay abuuraan oo ay wadaagaan sawirrada iyo fiidiyowga, u oggolow inay helaan oo ay is raacaan midba midka kale, siiyaan barnaamijyada moobiilka ee daahfurka iyo wadaagga bulshada
U oggolow dhagaystayaashaada inay abuuraan oo ay wadaagaan sheekooyinkooda - ka dibna la wadaag kuwa ugu wanaagsan iyaga oo adeegsanaya kanaalkan iyaga oo si ballaaran u gaaraya. Sheekooyinka u dhigma dhagaystayaasha natiijooyinka ugu saamaynta badan.
Tags: saamayntagaaraanmadadaalo isboortiwarbaahinta dhaqanka
Raadinta Macluumaadka Suuqgeynta ROI ee Dhimashada
Macaamiisha Hantida leh Waxay Doonaan Daryeelka Macaamiisha Bulshada